လမ်းဆုံ .....: December 2010
နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် Computer Desktop မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့
ဒီနေရာကနေ သွားပြီးလည်း ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် http://www.clocx.net
ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း Forward မေးထဲကအတိုင်း ဖော်ပြပေးပါတယ် ..
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ် ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ ....
အမြင် တစ်မျိုးဆန်းတဲ့ Skin လန်းလန်းလေးတွေနဲ့ နာရီလေးတွေ Dasktop ပေါ်မှာ တင်ထားလို့ရသလို Alarms လည်းပေးထားလို့ရပါတယ်ဗျာ....။
ကွန်ပျုတာ သုံးနေရင်းကနေ တစ်ခြားလုပ်စရာတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် သွားစရာတစ်ခုခု ရှိနေခဲ့မယ် အဲဒီအချိန်ကို သတိပေးဘို့ ဒီကောင်လေးက ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်...။
File Size ကလည်း 1 MB မပြည့်တာမို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ယူထားလိုက်ကြပါလေ...
ကဲ စကားတွေရှည်မနေတော့ပါဘူး အောက်မှာ စပြီ....
Install လုပ်ပြီးရင် ခုလို Clock ပုံကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် တကယ်လို့ မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ Start menu ===> All Program ကနေဖွင့်လိုက်ပါ...။
အခု Skin ပြောင်းတာလေး ရှင်းပြပါ့မယ်..
ပုံထဲကအတိုင်း နာရီပေါ်မှာ Right Click ပြီး Options ပေါ့ဗျာ...
Options မှာ Appearance tab ကိုကလစ်ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း Background အောက်မှာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်....
ဒီမှာတော့ Alarms ပေးရန်အတွက်ကို ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်...
ပုံထဲကအတိုင်း နာရီပေါ်မှာ Right Click ပြီး Alarms ကိုကလစ်ပေးပါ...
ပုံထဲကအတိုင်း New ကိုကလစ်ပေးပါ....
(1)မှာတော့ အဆင်ပြေသလိုသာ ရွေးပေးလိုက်ပါ...
(2) မှာတော့ Alarms Song သို့မဟုတ် Video ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ...
(3) မှာတော့ Alarms မြည်လာတာနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အချိန်ကိုက် ဖွင့်ရမည့် Program ကို ရွေးပေးနိုင်ပါတယ်...
ပြီးရင်တော့ OK ကိုကလစ်ပေါ့ဗျာ...
မိမိ Alarms ပေးထားတဲ့ အချိန်ကိုရောက်ရင်တော့ အောက်က ပုံထဲကအတိုင်း သတိပေးပါလိမ့်မယ်...
ကွန်ပျုတာသုံးရင်း တစ်ခြားလုပ်စရာတွေကို မေ့လျော့တက်ကြလွန်းရင် attach file နဲ့ အပေါ်မှာ Download လုပ်ယူသွားလိုက်ကြပါခင်ဗျာ....
ReadMoe “Happy New Year 2011”
Posted by Kaung Khant at 31.12.100comments Links to this post
ဓါတ်ပုံ ရုပ်ပြောင်တွေ လုပ်ရအောင်
ဒီနေရာလေးမှာ သွားကြည့်ပေါ့နော် ..
လက်တွေ့စမ်းပြီးရင် ကျွန်တော်မေးကို ပို့ပေးပါဦး ..
ReadMoe “ဓါတ်ပုံ ရုပ်ပြောင်တွေ လုပ်ရအောင်”
Posted by Kaung Khant at 16.12.100comments Links to this post
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဖိုင်များကို လိုသလို အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်
ReadMoe “Online Converter”
သတင်းကောင်း ပါးလိုက်သည် ..
မြန်မာနိုင်ငံတွင် CDMA 800 MHz ဖုန်းများကို ရန်ကုန် . မန္တလေး . နေပြည်တော် တို့တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ရာမှ
ယခုအခါ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးပြုနိုင်သော CDMA 450 MHz ဖုန်းများ နည်းတူ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ထိုကြောင့် CDMA 800 MHz ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် QLink ဖုန်းလက်ကိုင်စက်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ ။ QLink ၏ အားသာချက်မှာ 800 MHz ရော 450 MHz ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး လိုင်းဆွဲအား အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ လက်လီ/လက်ကား ၀ယ်ယူလိုသူများ 01-73032767 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ReadMoe “သတင်းကောင်း ပါးလိုက်သည် ..”
Posted by Kaung Khant at 11.12.100comments Links to this post